Niala Tao An-tanànan’i Raqqa Any Syria Ny ISIS, Saingy Mbola Mandratra Sy Mamono Ny Vanja Naleviny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2018 2:39 GMT
Vakio amin'ny teny русский, عربي, Ελληνικά, Português, Español, македонски, Français, Italiano, English
Fahapotehan'ny làlana Al-Qouati ao an-tanànan'i Raqqa. Sary avy amin'i Abood Hamam, nahazoana alàlana.
Nandritra ny efatra taona teo ho eo, teo anelanelan'ny 2013 sy 2017, ny tanànan'i Raqqa any Syria dia nijanona teo ambany fifehezan'ny iray amin'ireo vondrona jihadista tena lian-drà tamin'ity taonjato ity : ISIS, Daesh ary Fanjakana Islamika.
Nandritra ny fotoana nanjakany, dia noteren'ny ISIS ny mponina tao an-tanàna, izay nambarany fa renivohitry ny “kalifà”-ny (fitondràny), mba hanaraka ireo fitsipika mihoa-pefiny. Vonoina amin'ny alàlan'ny fanomboana na fomba famonoana mahery setra ireo izay tsy mankatò.
Tamin'ny Oktobra 2017, taorian'ny ady nandritra ny efatra volana, dia nahavita nifehy ny tanàna sy nandroaka ny ISIS ny Tafika Demokratika Syriana (SDF) — fikambanan'ny Kiorda , Arabo, Asyriana ary ireo vondrona hafa notohanan'i Etazonia. Voalaza fa nisy fifanarahana teo amin'ny SDF sy ny ISIS ny famerenana an'i Raqqa amin'ny laoniny mba hahafahan'ireo mpiadin'ny ISIS sy ny fianakaviany mandalo tsy manana ahiahy any Deir Ezzor any atsinanan'i Syria araka ny voalazan'ny BBC.
Saingy na teo aza ny faharesen'ny vondrona tao Raqqa, dia tsy mbola nitsahatra nitereka zava-doza tamin'ny mponin'i tanàna ihany ny ISIS. Tahaka izay nolazain'ilay mpiadin'ny ISIS iray tamin'ireo olona sivily talohan'ny nialàny ny tanàna, ” hiady ho anay ny tany”.
Amin'ny alàlan'ny vanja milevina no fomba iray “hiadian'ny tany” ho an'ny ISIS.
Niresaka tamin'ny feo feno alahelo tamin'ny Global Voices i Abu Fares, lehilahy iray 53 taona izay namoy ny zanany roalahy tamin'ny alàlan'ny vanja milevina napetraky ny ISIS :
Rehefa nanafika ny tanàna ny SDF sy ny fiaraha-misalahin'ny iraisam-pirenena, dia voatery niala izahay. Na izany aza, tsy afaka niala teny am-piandohan'ny ady izahay satria nataon'ny ISIS ho ampinga fiarovana. Nafoiko nandritra ny ezaka nataonay handositra ny tanàna ao amin'ny distrikan'i Shahdah ny iray amin'ny zanako lahy rehefa nipoahan'ny vanja milevina.
Vakio: Namela Vanja Milevina An'arivony Any Manjib Ny ISIS Talohan'ny Nandosirany. Nafenin-dry Zareo Tany Anaty Karazan-Javatra.
Namoy ny zanany lahy faharoa indray i Abu Fares iray volana taorian'ny fiafaran'ny ady :
Iray volana aty aorian'ny fiafaran'ny ady, dia nahazo niverina tany amin'ny tranonay izahay. Nirahako ny iray amin'ireo zanako lahy mba hizaha ny tranonay teo akaikin'ilay ‘rond-point’ famantaranandro, saingy rehefa tonga teo izy, dia vanja milevina no niandry azy teo anoloan'ny varavaramben'ny trano.
220 no fitambaran'ny sivily maty ary am-polony maro no naratra tao Raqqa noho ny vanja nalevin'ny ISIS hatramin'ny fandresen'ny SDF, araka ny filazan'ny mpikambana iray ao amin'ny “Raqqa is Being Slaughtered Silently” “( ho ringana mangingina i Raqqa) ” vondron'ireo mafana fo ao an-toerana izay manadihady ireo herisetra tao amin'ny tanàna.
Baomba nalevin'ny ISIS any Raqqa. Sary nalain'ny “Raqqa is being slaughtered silently.” Nahazoana alàlana.
Tamin'ny fotoana nanombohan'ny hetsika “Hatezeran'i Eofrata”, anarana miafina iantsoana ny hetsika fanoherana ny ISIS tamin'ny Novambra 2016 no nanombohan'ny ISIS nandevina ireo vanja marobe mba hanakanana ny tafiky ny SDF tsy handroso ao Raqqa. Nefa mazàna dia ireo sivily mandositra ny ady no matin'ireny vanja milevina ireny fa tsy izay nokendrena.
Mpiadin'ny SDF marobe ihany koa no matin'ilay fitaovana mipoaka, isan'izany ilay mpiady an-tsitrapo Anglisy Oliver Hall izay maty volana vitsivitsy lasa tamin'ny fotoana nanadiovany ireo vanja milevina. Hatramin'ny fotoana nanoratana dia tsy mbola nilaza ny isan'ireo mpiady matin'ireo baomba ireo ny SDF.
Fikambanana iray miasa an-tsitrapo antsoina hoe “Roj” ( fanafohezana ny Rojava, faritra any avaratr'i Syria sy andrefan'i Kiordistàna) no miasa manala ny vanja an'arivony miaraka amin'ny fanampian'ny Fikambanan'ny Olom-pirenena tsotra ao Raqqa sy ireo fikambanana iraisam-pirenena. “Mbola tsy nahita isanà vanja tsy mbola nipoaka tahaka izany izahay hatramin'izay”, hoy ilay sekretera jeneraly lefitry ny Firenena Mikambana Panos Moumtzis tamin'ny masoivohom-baovao Reuters tamin'ny Febroary 2018.
Fa ho an'ireo mponina sasany dia tsy haingana ny fahatongavan'io asa io. Amira, 35 taona, dia nitantara tamin'ny Global Voices fa tsy maintsy nandoa vola 50.000 pound syriana (tokotokony ho 100 dolara amerikana) tamin'olona manokana izy mba hanala ny vanja tao an-tranony rehefa nolavin'ireo fikambanana miasa amin'ny fanalàna izany ny fangatahany, sady nolazainy fa tsy mbola tonga ny anjaran'ireo manodidina azy.
Nolazainy fa tsy maintsy niverina tany Raqqa izy rehefa nandositra tany am-boalohany noho ny fepetra iainana mampihorohoro tao amin'ny toby tany avaratra nampiantranoana ireo olona nifindra toerana :
Nandevina vanja hatraiza hatraiza ny ISIS, any ambany fandriana, any anivon'ny korontana, ao anaty vata fampangatsiahana sy ny milina fanasàna lamba, eny fa hatrany anaty takamoa mandeha amin'ny herinaratra aza dia nahitan'ireo manampahaizana baomba.
Araka ny filazan'ny mponina, dia ny faritr'i Al-Tayar, Al-Mishlab ary Al-Darriah no hany faritra fonenana izay tena voadio tanteraka amin'ny vanja milevina hatramin'izao.
Vakio: Siriàna Roa Mpikatroka Mafana Fo Manazava Ny Zavatra Niainany Fony Izy Ireo Gadran'ny ISIS Tao Al-Bab
Tena miadana be ny fandehan'ny fanalàna vanja milevina any Raqqa noho ny tsy fahampian'ny vola sy ny fitaovana ilaina ho an'ny Fikambanana Sivily. Io toe-draharaha io no manery ireo sivily hiverina any amin'ny tranony tsy azo antoka, ka mahatonga ireo voina matetika ao amin'ny tanàna izay efa nijaly tamin'ny fibodoan'ny ISIS efa ho efatra taona.